महिनावारी र कोभिड: के खोपले महिनावारीलाई असर गर्छ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / महिनावारी र कोभिड: के खोपले महिनावारीलाई असर गर्छ?
admin January 25, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 63 Views
काठमाडौं । खोप लगाएपछि तपाईँको महिनावारीमा केही फेरबदल आएको छ । यदि आएको छ भने जिवनभर त्यस्तै होला कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने विषय होइन । किन भने बिज्ञहरुले यो समस्या धेरै लामो समय नरहने जानकारी दिएका छन् ।
यसको जवाफ अहिलेसम्म ठयाक्कै के हुन्छ भन्ने कसैले दिन सकेका छैनन् । तर कोभिड पश्चात धेरै महिलाहरुले महिनावारीमा परिवर्तन आएको बताउँदै आएका छन् । धेरैले भन्दै आएको मुख्य कुरामा नियमित भन्दा अत्यधिक रतmसाव भएको अथवा महिनावारी अलि ढिला भएको भन्ने छ । काभिडको खोप लगाउनु भन्दा अगाडी अन्य बेला कुनै खोप लगाएपछि महिनावारीमा फेरवदल आएको कतिपय महिलाहरुले भोगेको कुरा हो । तर ती खोप लगाएपछि एक वा दुई पटकसम्म महिनावारीमा त्यस्तो परिवर्तन आउने र पछि सामान्य अवस्थामा फर्किने गर्छ ।
हामीलाई थाहा छ प्रतिरक्षा प्रणालीले से -क्स हर्मोनलाई असर गर्छ । र से’ ‘क्स हर्मोनले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ । र से ”क्स हर्मोनले नै तपाइँको महिनावारी गराइरहेको हुन्छ । त्यसकारण यदि हामीले खोप लिएका कारण वा कुनै किसिमको सङ्क्रमण भएका कारण तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ठूलो झट्का दियो भने तपाईँको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ ।
त्यसले तपाईँको महिनावारी कहिले र कसरी भने निश्चित गर्छ । अन्य सम्भावना भनेको तपाईँको पाठेघरको सतहमा थुपै्र प्रतिरक्षा कोष हुन्छन् । एउटा सम्भावना के छ भने खोप लगाएका कारण तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुँदाको असरले महिनावारीमा परिवर्तन अवस्य ल्याउन सक्छ। अब भिडियो रिपोर्ट तल हेर्नुहोस
Previous आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी लकडाउन घोषणा , सूचना सहित हेर्नुस
Next निधारको यो भागमा १ मिनेटसम्म दबाउनुहोस्,आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार